ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့် - Akhayar Lifestyle
20 Jan 2017 . 6:18 PM
အလုပ်ရှင်တွေက “ဝန်ထမ်းတွေကို လစာပေးထားတာပဲ သူတို့တွေအတွက် လုံလောက်ပါပြီ” ဆိုပြီး အာဏာရှင်ဆန်ဆန် တွေးထားလို့မရပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို လစာပေးထားရုံနဲ့တင် မလုံလောက်သေးပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က လစာအပြင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ တခြားရသင့်ရထိုက်တဲ့အရာတွေကို အားလုံးရှေ့မှာဖွင့်ချလိုက်ရင် အလုပ်ရှင်တွေ ဖျားသွားမှာနော်။ အဲဒီတော့ ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို သိစေဖို့ မီးမောင်းထိုးပြလိုက်မယ်နော်။ သေချာကြည့် ချလောက်။
၁။ ဆက်ဆံရေးကောင်း ရပါစေ။
ဝန်ထမ်းသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်စဆင်းပြီဆိုတာနဲ့ စီနီယာတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးကလည်း အရေးပါတယ်ဗျ။ စီနီယာတွေက ဝန်ထမ်းသစ်ကို သေသေချာချာမရှင်းပြချင်တာတွေ၊ ဆရာလုပ်လွန်းတာတွေများနေရင် ဝန်ထမ်းသစ်က လန့်ပြေးပြီး နောက်ရက် အလုပ်မဆင်းတော့ဘူးနော်။ အဲဒီတော့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးရသင့်တယ်ဗျာ။ ဒါမှလည်း ပျော်ပျော်ပါးပါးအလုပ်လုပ်နိုင်မှာလေ။
၂။ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရပါစေ။
နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်က အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို သစ်ပင်ခုတ်ခိုင်းရုံတင်မကဘဲနဲ့ ပုဆိန်လည်း သွေးခိုင်းသင့်တယ်ဗျာ။ လုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်ဖို့အတွက် Training ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းကို ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီး တက်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဝန်ထမ်းရဲ့ အရည်အသွေးကို မြင့်တင်ပေးသင့်တယ်။ ဒါတွေကလည်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လစာအပြင် တခြားရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးပါပဲ။
You May Like : ဒီလိုသူဌေးမျိုးဆီမှာ အလုပ်မလုပ်လေနဲ့
အလုပ်ကို ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုကျတော့ နေရာမပေးဘဲနဲ့ ဖော်လံဖားဝန်ထမ်းတွေကိုပဲ မျက်နှာသာပေးတတ်တဲ့ မန်နေဂျာမျိုးရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီမျိုးမှာ အလုပ်လုပ်ရတာလည်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း မန်နေဂျာကိုယ်တိုင်က “အထက်ဖား၊ အောက်ဖိ” ဖြစ်နေရင်လည်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် တက်လမ်းပိတ်တော့တာပဲ။
၄။ အကြောက်တရားလည်း ကင်းပါစေ။
ဝန်ထမ်းတွေအတွက် တစ်ခါတစ်လေမှာ ခံစားချက်တွေကို ပေါက်ကွဲလိုက်တာက အကောင်းဆုံးဖြေသိမ့်ရာပါ။ ဒါပေမယ့် ချောက်ချတတ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က အလုပ်ရှင်ကို ဖောက်သည်ပြန်ချမယ်ဆိုရင် ပေါက်ကွဲမိတဲ့ ဝန်ထမ်းအတွက် အထုတ်ခံရဖို့ပဲရှိတာပါ။ အဲဒီတော့ ဝန်ထမ်းအတွက် အကြောက်တရားကင်းကင်းပြောနိုင်ဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့သဘောက “လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်” ရှိပါစေ။
၅။ အလေးထား ဆက်ဆံခံရပါစေ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ မွေးနေ့ရှင်အတွက် ကိတ်မုန့်လေးခွဲပြီး မွေးနေ့ပွဲလုပ်ပေးလိုက်တာက ဘာမှတော့မဟုတ်လှပေမယ့် “ငါ့ကို အလေးထားပါလား” ဆိုပြီး ဝန်ထမ်းစိတ်မှာ ထင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို အလေးထားဆက်ဆံရပါမယ်။ ပြီးတော့လည်း ပျော်ပွဲစားခရီးတွေ၊ အပန်းဖြေခရီးထွက်တာတွေကိုလည်း လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကဲ . . ဒါတွေကတော့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လစာအပြင် တခြားရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေပါပဲ။ အခရာပရိသတ်ကြီးရော လုပ်ငန်းခွင်မှာ အခွင့်အလမ်းတွေ ရနေပြီလား၊ ကြွားလိုက်ကြရအောင်။
by Htet Htet . 13 hours ago
by yoelu . 14 hours ago
by Kyaw Soe Aung . 15 hours ago
by Htet Htet . 16 hours ago